R/Wasaarihii Urdun Oo iscasilay Kadib Kacdoon Ay Dhigeen Shacabka Wadanka.
Tuesday June 05, 2018 - 06:22:39 in Wararka by Super Admin
Kadib shan maalmood oo dibad baxyo rabshado wata ka socdeen Wadanka Urdun ayuu iscasilaad ku dhawaaqay R/wasaarihii wadankaasi.
Haani Al Mulqi oo ahaa R/wasaarihii xukuumadda Urdun ayaa iscasilay waxaana lagu bedelay siyaasi lagu magacaabo Cumar Alrazaaz oo kamid ahaa gacan yarayaasha Boqorka Urdun.
Iscasilaadda ayey soo dhoweeyeen hoggaamiyaasha kacdoonka wada waxayna ku baaqeen in lasoo dhiso xukuumad cusub oo wax ka qabata dhibaatada dhanka dhaqaalaha ee ragaadisay wadanka Urdun.
Malaayiin qof urduniyiin ah ayaa dibad baxyo ka dhigaya magaalooyinka waaweyn ee wadanka iyo gobollada waxaana kamid ah magaalada caasimadda ah ee cammaan, kacdoonka shacbiga ah ayaa loogasoo horjeedaa dhibaatada dhaqaale ee Urdun halakeysay muddo sanada ah.
Carada shacabka ayaa sii xoogeysatay kadib markii xukuumadda dabadhilifka ah ay adeegsatay siyaasado dhanka dhaqaalaha ah oo aad uguruccan sida iyadoo soo saartay qaanuun kordhinayo lacagaha canshuuraha ah ee laga qaadayo badeecadaha wadanka dibadda lagasoo geliyo iyo kuwa dibadda loo dhoofiyo iyo sidoo kale qiimaha lagu iibiyo shidaalka iyo waxyaabaha lashito oo cirka isku shareeray.
Boqorka Urdun cabdalla althaani ayaa kulan laqaatay odayaasha dhaqanka iyo hoggaamiyaasha hotrboodaya kacdoonka wuxuuna ugu baaqay in ay xaaladda dejiyaan, xaaladda ayaa sii xoogeysatay markii shan maalmood oo xiriir ah ay dibad baxyadu ku faafeen dhammaan wadanka min magaalo illaa iyo tuulo waxaana hakad galay dhammaan goobaha ganacsiga iyo adeegyada bulshada.
Musuq maasuq iyo wax isdabamarin ayaa lasheegay in ay ku dhaqaaqeen golihii wasiirrada xukuumadda lacasilay, shacabka urdun oo ka sheeganaya dhaqaale yari ayaa kasii carooday siyaasadaha gurrucan ee canshuuraha lagu kordhiyay.
dhinaca kale tobaneeyo qof oo kamid ah dadka kacdoonka dhigaya ayaa xabsiyda loo taxaabay waxaana jira xadgudubyo loo geystay dadkaasi.
Taliyaha Booliska Xukuumadda Dabadhilifka Urdun ayaa shir jaraa'id ku sheegay in ay xireen 60 qof oo uu ku eedeeyay in ay weerar ugeysteen ciidamada ammaanka islamarkaana ay maxkamad soo taagi doonaan.
Hoggaamiyaasha dadka kacdoonka wada ayaa ku eedeeyay xukuumadda dabadhilifka ah in ay adeegsatay awood xad dhaaf ah oo ay ku kala eryaysay dadka dibad baxyada dhigaya, dhinaca kale xukuumadda cammaan ayaa sheegtay in ay xirtay dad ajaanib ah oo ay ku sheegtay in ay qeyb ka ahaayeen kicinta dadweynaha.
Dhaawacyada Shacabka Muslimiinta Boorma oo loo diiday in dhiig loo shubo [Warbixin].
Itoobiya oo sheegtay in ay qabatay Koox dilal u maleegaysay Mas'uuliyiinta ugu sarraysa wadanka.
Shacabka Soomaaliyeed Oo si Heer sare ah usoo dhoweeyay Go'aankii Ay Al Shabaab ka Qaadatay Kooxda Daacish [Dhageyso].
168 Qof oo ku dhintay Wadanka Indonesia Kadib qaraxyo ka dhacay Badda Gunteeda.
Xabad Joojintii Magaalada Al Xudeyda oo Fashilantay Kadib Markii ay dagaallo culus dib uga qarxeen.